ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့လို့ နိုဗယ်လ်ဆု ရဖို့ သေချာသွားတဲ့ ပညာရှင် ဆရာဝန်လင်မယား – Maythadin
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ဖေါ်စပ်လိုက်သူကတော့ တူရကီ ဂျာမာန်လူမျိုး ??. ???? ????? ဆိုတဲ့ ????????????? ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးဆရာဝန်တယောက်ပါ။ သူ့ကုမ္ပဏီက ???????? လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ ဂျာမဏီမှာနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦးပါ။လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ပညာရှင်တွေ
ဖြစ်ကြပါတယ်၊ သူတို့ဟာ လူ့ခန္တာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေကို စူပါမင်းလိုဖြစ်အောင်ပြင်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဆေးကို အောင်မြင်အောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူကီးမီးယားတို့ ဦးဏှောက်ကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာအတော်များများကို အဲ့ဒီ ????????????? နည်းနဲ့စပြီး ကုသနေကြပါပြီ။
သူ့ရဲ့ ????????????? ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိမှုတွေကြောင့် သူဟာ ကုဋေကြွယ် ဘီလီယံနာကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ အလွန်ချမ်းသာပေမဲ့ သူတို့လင်မယားဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေပြီး ဆေးသုတေသနတွေပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သူတို့တွေ့ထားတဲ့ ???? နည်းနဲ့ ကာကွယ်ဆေးဖေါ်နိုင်မယ် လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်
သူတို့ဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီလကတည်းကစပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေအတွက် ဆေးအလုံးရေ ဘီလီယံပေါင်းများစွာထုတ်နိုင်ဖို့ အားမရှိလို့ ဆေးလောကမှာ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ?????? နဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ပေါင်းထုတ်နေပါတယ်။အခုသူတို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကြောင့်
ဘယ်လောက်ထပ်ပြီး ချမ်းသာလာမလဲဆိုတာ မှန်းလို့မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ဆေးဟာ ????????? ??? နည်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဆေးပါ။ ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံးနည်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တရာအတွင်း ဆေးလောကရဲ့ အမြင့်မားဆုံးအောင်မြင်မှု မှတ်တမ်း လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့လင်မယားဟာ ဆေးပညာဆိုင်ရာ နိုဗယ်လ်ဆု ရဖို့သေချာသလောက် ပါပဲ။
ကိုဗဈကာကှယျဆေးကို ဖျေါစပျလိုကျသူကတော့ တူရကီ ဂြာမာနျလူမြိုး ??. ???? ????? ဆိုတဲ့ ????????????? ကိုယျခံစှမျးအားနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဆေးဆရာဝနျတယောကျပါ။ သူ့ကုမ်ပဏီက ???????? လို့ချေါပါတယျ။ သူဟာ ဂြာမဏီမှာနတေဲ့ အစ်စလာမျဘာသာဝငျတဦးပါ။လငျမယားနှဈယောကျလုံးက ဆေးထုတျလုပျတဲ့ ပညာရှငျတှေ
ဖွဈကွပါတယျ၊ သူတို့ဟာ လူ့ခန်တာကိုယျထဲက ဆဲလျတှကေို စူပါမငျးလိုဖွဈအောငျပွငျပွီး ကငျဆာဆဲလျတှကေို တိုကျထုတျနိုငျတဲ့ ဆေးကို အောငျမွငျအောငျထုတျလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ လူကီးမီးယားတို့ ဦးဏှောကျကငျဆာ ရငျသားကငျဆာနဲ့ ကငျဆာအတျောမြားမြားကို အဲ့ဒီ ????????????? နညျးနဲ့စပွီး ကုသနကွေပါပွီ။
သူ့ရဲ့ ????????????? ဆိုငျရာ တှရှေိ့မှုတှကွေောငျ့ သူဟာ ကုဋကွှေယျ ဘီလီယံနာကွီး ဖွဈလာပါတယျ။ အလှနျခမျြးသာပမေဲ့ သူတို့လငျမယားဟာ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနပွေီး ဆေးသုတသေနတှပေဲ စိတျဝငျစားပါတယျ။ဒီကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးကို သူတို့တှထေ့ားတဲ့ ???? နညျးနဲ့ ကာကှယျဆေးဖျေါနိုငျမယျ လို့ယုံကွညျတဲ့အတှကျ
သူတို့ဟာ ဖဖေျေါဝါရီလကတညျးကစပွီး စမျးသပျခဲ့ပါတယျ။သူတို့ကုမ်ပဏီဟာ ကမ်ဘာ့လူဦးရအေတှကျ ဆေးအလုံးရေ ဘီလီယံပေါငျးမြားစှာထုတျနိုငျဖို့ အားမရှိလို့ ဆေးလောကမှာ အကွီးဆုံးကုမ်ပဏီတခုဖွဈတဲ့ အမရေိကနျကုမ်ပဏီ ?????? နဲ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးကို ပေါငျးထုတျနပေါတယျ။အခုသူတို့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးကွောငျ့
ဘယျလောကျထပျပွီး ခမျြးသာလာမလဲဆိုတာ မှနျးလို့မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ဆေးဟာ ????????? ??? နညျးနဲ့ထုတျထားတဲ့ဆေးပါ။ ကမ်ဘာမှာ ပထမဆုံးနညျးစနဈ ဖွဈပါတယျ။ နှဈတရာအတှငျး ဆေးလောကရဲ့ အမွငျ့မားဆုံးအောငျမွငျမှု မှတျတမျး လို့ဆိုပါတယျ။သူတို့လငျမယားဟာ ဆေးပညာဆိုငျရာ နိုဗယျလျဆု ရဖို့သခြောသလောကျ ပါပဲ။